XNXX: Nei isu tichida kuita zvepabonde uye kuita zvepabonde nguva dzose panguva yezhizha - Tamban RELAY
XNXX: Sei isu tichida bonde uye kuita zvepabonde nguva dzose panguva yezhizha?
Zvepabonde uye hukamaMY HEALTHSAYENSI
Wazviona here kuti libido yako yakanyanya kudarika muzhizha? Zvakajairika uye isu totsanangura.
Sekutsvagurudza kwakaitwa naYeGov France, zvikamu makumi manomwe nezvitanhatu muzana zvevanhu vekuFrance vanoti vanoda kurara zvakanyanya muzhizha. Uye Ongororo dzinoverengeka dzinoratidza kuti vanhu vanogara munzvimbo dzinopisa, dzakasvibirira vane zvepabonde zvakanyanya. Asi unoita sei kushaiwa (pasina puns yakaipa)? Pane zvikonzero zvakati wandei zvekuwedzera kwe libido kana tembiricha ichimuka. Uye zuva rine chekuita nazvo. Chokwadi, mwenje wezuva wakaratidzirwa kuve wakabatana nekuwedzera kwe serotonin, kiyi neurotransmitter mukukwanisa kuona kufara. Izvi zvinosimudzira mweya uye simba.
Vitamin D yakapihwa nezuva uye zvakare inoita basa rakakosha mukuwedzera uku kwe libido. Akawedzera vhitamini D mazinga anowedzera mumuviri, kana wakaneta zvishoma, zvishoma kana musoro wako, kurara kwako kuri nani. Uye apo nyaya dzehutano idzi padzinogadzirisika, saka ita nekumhanyisa uye kuzvivimba, izvo zvinobatsira kuwedzera kunzwa kwekufara mukuita uku. Izvi ndezvokutsanangurwa kwesainzi. Asi pane zvimwewo zvimwe zvinhu zvekufunga nezvazvo. Kana muzhizha, chishuwo chebonde chichiwedzera, zviri zvakare nekuti isu takapoteredzwa nezvinhu zvinomutsa chishuvo chedu. Nekuwedzera kwekushisa, varume nevakadzi undress, kuratidza maoko avo, makumbo avo uye, pamhenderekedzo, dumbu ravo, mabhurugwa avo nemateya avo.
Miviri iri kubuda pachena uye ichi chine chimwe chinhu chekurudzira mahormone edu, kuwedzera kufadza kwedu. Pasina kutaura kuti kusvinwa kune mhedzisiro pane edu mapokeri Uye kana tikawedzera kune izvo zhizha, isu tambozorora kupfuura gore rose, izvo zvinobatsira. Muzhizha, tinoshanda zvishoma zvakanyanya, tinotora zororo, tinozvishingisa nemasikati masikati pamhenderekedzo yegungwa kana kumaruwa, mabebecs ane shamwari, cocktails pachitima. Tine nguva yakawanda uye tine yakawanda rusununguko, zvekuti isu tishushikane zvishoma uye saka isu tiri zvakanyanya kuvhurika pazinga repabonde. Zvese zvinhu izvi zvinoita kuti tide kuendesa zvikuru nguva zhinji mumafaro enyama uye kuyedza zvimwe naughty mitambo newaakabatana naye.
kunobva: https: //trendy.letudiant.fr/le-conseil-sexy-du-lundi-pourquoi-a-t-on-plus-envie-de-sexe-en-ete-a4995.html
Mapepa epamusoro ekutengesa ekutenga nekutengesa cryptocurrencies
Tsvaga mazano edu mashanu echisikigo kuchengeta umhutu kure
Kana iwe ukaona uyu muti musango, mhanya - BGR
Cameroon: Chii chingaitwa nemapato anopikisa kuCPDM musarudzo ...
Dr. Fauci vanoti iyi ndiyo nyika iri kuita basa rakanakisa rine COVID-19 - BGR